Uyifaka njani iVenkile yokudlala kaGoogle kuyo nayiphi na iAmazon Fire HD ngaphandle kweengcambu | I-Androidsis
UManuel Ramirez | | Ingcambu Android, Izaziso, Amacwecwe e-Android, Ukukopela kwe-Android, Tutorials
Olu qeqesho luhlaziywa ngoJuni 1, 2020
Amacwecwe eAmazon Bathengisiwe njengamadonathi phantse njenge Amacwecwe amaTshayina, okoko zazisungulwa ngaphezulu konyaka odlulileyo. Ithebhulethi ebonelela ngokusebenza okuhle ekuvelisweni kwakhona kwazo zonke iintlobo zemixholo yemultimedia kwaye ngexabiso elikuyo, iFire HD 8 kolu ngeno okwangoku nge-99.99 euros, phantse akunakwenzeka ukuba ungathengi enye yosapho lonke.
Esinye seziphene ezincinci kula macwecwe, nokuba sinefolokhwe yenguqulo ye-Android, kukuba asinakho ukufikelela kwiVenkile yeGoogle Play, kuba inevenkile yayo yeAmazon. Le venkile ayiyonto imbi kwaphela, kodwa ayinazicelo zininzi kwaye konke okuqulathiweyo kunikezelwe nguGoogle kwi-Android. Ayizizo zonke izinto ezilahlekileyo, kuba, ukuba unayo ithebhulethi yoMlilo HD evela eAmazon, ungafaka iGoogle Play Store ukuba ulandela onke amanyathelo angezantsi okanye ividiyo eyenziwe ngokufanayo. Kunjalo nje, Awuyi kufuna ukuba ube yingcambu okanye usebenzise imiyalelo ye-ADB.
Uyifaka njani iVenkile yokudlala kaGoogle kuyo nayiphi na itafile yeAmazon HD
Kule tutorial kunye nevidiyo ndisebenzise iAmazon Fire HD 8 endisele ndinayo Ndifumene ukubonakala kwam okokuqala kwithuba elifutshane elidlulileyo. Olu qeqesho Isebenza kuyo nayiphi na ithebhulethi yoMlilo yeAmazon, nokuba ikwiskrini esi-7 okanye isizukulwana esitsha sesi-8 nesesi-9 somlilo, ke masiqhubeke.
ukuba faka ii-APK ezifunekayo, nangona ingesosibophelelo, kuba unokucofa kwindawo yesaziso xa ukhuphela ngokufanayo, siza kufaka Umhloli weFayile ye-ES ifunyenwe kwivenkile yeAmazon. Nawuphi na omnye umphandi oya kuyenza.
Ngoku kufuneka siye ku Useto> Ukhuseleko kunye nokufaka okusebenzayo kwimithombo engaziwayo
Oku kulandelayo khuphela zonke i-APK ezinesa ngoko e zifakele njengoko sizikhuphela ngendlela esizikhuphele ngayo:
Umphathi weAkhawunti kaGoogle 7.1.2 (Android 6.0+)
Isakhelo seenkonzo zikaGoogle 9 (i-Android 9.0+)
Iinkonzo zikaGoogle Play 20.18.17 (000300-311416286) (000300)
Ngale nto uza kuba nazo zonke iiapps zikaGoogle kunye kubandakanya zonke iinkonzo ezinxulumene noko ukuya kwimidlalo. Ngale ndlela unokufikelela kwi-repertoire enkulu yeeapps ezivela kwithebhulethi ebonelela ngamava amnandi njengoko benditshilo. Kwakhona, ungaphoswa ziiapps dlala ivenkile simahla onokuyifumana yonke imihla ukuba undwendwela icandelo lethu lemihla ngemihla.
Ndiyisusile iVenkile yokuDlala kuGoogle. Ndiyifaka njani kwakhona?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Uyifaka njani iVenkile yokudlala kaGoogle kuyo nayiphi na itafile yeAmazon HD ngaphandle kweengcambu okanye iADB
Izimvo ezi-22, shiya ezakho
… Kwaye ubomi bebhetri buya kuncitshiswa kakhulu 😉
Phendula u-El Davo
Ukutshintshiselana ngokuba nazo zonke iiapps ozifunayo, urhwebo oluhle luye! Ukubulisa
Molo, ukuba ndifaka iinkonzo zikaGoogle, ngaba iyazichaphazela iinkonzo zeAmazon?
Enkosi, ivenkile yokudlala isebenza ngokugqibeleleyo kwifire hd8 ″ 2020 ethi ayisebenzi ukulandela amanyathelo ngamanye njengoko ebonakala kwisifundo, musa ukutsiba nayiphi na, ekuphela kwento engasebenziyo ukubeka i-laucher okanye ikhibhodi, leyo ngokungagqibekanga ayipholi, umntu uyayazi enye esebenza kulomlilo mtsha iitutorials zangaphambili azisebenzi kulutsha ndizamile zona.
Ikati engwevu sitsho
Molo, ndinombuzo. Ndine-5.3.3.0 kwaye andazi ukuba iinkonzo zokudlala zikaGoogle zisebenza kakuhle. Kungenxa yokuba ndifuna ukudlala imidlalo efana neClash Royal kunye nokungqubana kwezindlu ezigcina iinkonzo kufuneka zisebenze kakuhle. Ihlala isilela kum. Ngaba iinkonzo zingasebenza kakuhle? Phendula nceda. Ndine Kindle Fire 7 hd. Inguqulelo yesoftware 5.3.3.0
Phendula Grey Cat
Molo, ndinenguqulo ye-OS 4.5.5.2 iya kuba kukukhuphela ivenkile yokudlala kwi-Kindle Fire HDX yam
Ndiyabulela kakhulu. Ihambe kakuhle
Ndine-Kindle yokujika i-HD ngenkqubo yenguqulo 7.5.1_user_5170020
Ndizikhuphele iifayile, kodwa xa ndizama ukufaka eyokuqala indixelela ukuba impazamo yokubonisa yenzekile kunye nephakheji kwaye ayindivumeli ukuba ndiyifake. Nasiphi na isisombululo?
Thatha into efanayo.
Xa ndivula ukudlala kuGoogle ndibanjwa "ndikhangela ulwazi". Nasiphi na isisombululo?
Ndinengxaki kwaye kukuba ndiyikhuphele iapk kwaye xa ndifuna ukuyenza indenza ukuba ndiphumelele ukuhlalutya iphakheji, ndinokukhuphela okusebenzayo kwezinye iindawo kodwa akwenzeki apho.
Enkosi kakhulu, kumlilo we-2015 7 ″, bekumnandi, kuyakhawuleza kwaye kulula, kuyahamba kakuhle, olu ncedo luyanconywa.
ULaura c sitsho
Ndiyayenza yonke le nkqubo kodwa ekugqibeleni iVenkile yokudlala ayizange ivele ekuqaleni kweapp. Ndingenza ntoni? Enkosi
Phendula uLaura c
UCarlos Eduardo sitsho
Enkosi kakhulu, ingcebiso esebenzayo, isebenza kwi-fire10 yomlilo
Phendula uCarlos Eduardo
Iicarles soler sitsho
Ndifakele yonke into kodwa i icon yevenkile yokudlala ayiveli kwidesktop.
Ndiya kwizicelo kwaye ukuba kunjalo kodwa ukusuka apho andinakuyivula.
Ndingayenza njani i icon ivele kwidesktop?
Phendula kwiCarles Soler
Uxolo, uyisombulule ingxaki yakho?
URamon Telleria sitsho
Ndithenge iThebhulethi yoMlilo HD 10 ukusukela nge-9. Isizukulwana, ngoJanuwari 24; kwaye ndiyiphethe ezandleni zam ukusukela ngomhla wama-30. Nangona kunjalo, namhlanje bendikhangela enye indlela yokufaka nayiphi na i-APK kuyo, kuba ndizamile ukufaka iGoogle Play kwindawo yogcino App ebendinayo, kodwa ayivulanga inje ukuza kuthi ga namhlanje.
Ndikhangele ndakhuphela ezinye iifayile endizibonileyo kwezinye iiwebhusayithi ezibanga ukuba ziyimfuneko; kwaye ndizamile iinguqulelo ezininzi kodwa akukho nanye esebenzayo.
Kuyabonakala ukuba ayisenzeki kwezi zangoku; okanye ukuba omnye umntu ukhe wazama enye indlela, nceda wabelane nathi.
Enkosi ngexesha lakho.
Phendula kuRamón Telleria
Kwabo bane-HD yoMlilo ye-10 ye-9. Isizukulwana ndincoma le vidiyo; kuba banikezela ngeefayile ezisebenza nayo.
Ngethamsanqa kubo bonke. Enkosi ngexesha lakho. Ubabalo noXolo.
UJose Dominguez sitsho
Ndinepilisi yomlilo 8, isizukulwana se-8, i-OS 6.3.1.5. Ndigunyazisa ii -apps ezinemvelaphi engaziwayo. Nje ukuba ii-apk ezine zikhutshelwe kwiVenkile yokudlala, ndizama ukufaka eyokuqala «umphathi weakhawunti», kodwa ayisebenzi. Umphathi weAkhawunti kaGoogle uvela kwiscreen, ndiyenza ukufaka kwaye "usetyenziso olungafakwanga" luyavela, "iphakheji ibonakala ngathi yonakele".
Ndizamile iinguqulelo ezikhutshelweyo ezindala kunezi apk kunye nempazamo efanayo.
Andazi ukuba kuya kufuneka ndibone, ukuba ngaphambili bendinevenkile yokudlala efakiweyo kwaye ndiyikhuphe ngempazamo.
Phendula ujose dominguez
Ikhonkco lesibini alisebenzi
Molo Carlos, ndizamile ikhonkco lesibini kwaye liyasebenza, nguwuphi lo ubhekisa kuye? Konke okugqibelele.
Ndiwenzile onke amanyathelo kodwa ekugqibeleni xa ndivula ibhegi yokudlala ihlala ibambekile «ukujonga ulwazi», ndenza ntoni ngoku? Sele enemizuzu engama-20 kuloo meko. Ndiyayixabisa kakhulu ingqalelo yakho.
I-Bullet Echo ngumbono ophezulu we-Zeptolab 'wedabi royale', abenzi beCrop Rop
Ke unokuvula imo yedesktop enje nge-Samsung DeX kwi-Taskbar ngohlobo lwayo lwe-6.0